Kedu ihe na-agbapụ na ụwa nke Cryptocurrencies? - Cazoo
Kedu ihe na-agbapụ na ụwa nke Cryptocurrencies?
Mbido » Mbido » Kedu ihe na-agbapụ na ụwa nke Cryptocurrencies?
Cryptocurmụta cryptocurrencies: ihe bụ Flippening
Tag: bitcoin, BTC, eth, ethereum, ịgbanye, Nkwekọrịta Smart
Oge ogugu: <1 nkeji
Usoro ahụ Agbatị edepụtara na 2017, ma na-ezo aka na o nwere ike ịbụ na ahịa ahịa nke Ethereum (ETH) karịrị nke Bitcoin (BTC).
Ya mere, okwu ahụ na-akọwa na hypothetical oge n'ọdịnihu ebe Ethereum ghọrọ nnukwu cryptocurrency site na isi ahịa.
A na-akọwa okpu ahịa nke cryptocurrency aghara aghara site na onyinye ya dị ugbu a na-abawanye site na ọnụahịa ahịa ya ugbu a (n'agbanyeghị na ụfọdụ usoro anaghị echebara mkpụrụ ego ma ọ bụ akara ngosi furu efu anya) Ka ọ dị ugbu a, Bitcoin nọ n'ọnọdụ mbụ n'ihe banyere okpu ahịa, na-esote Ethereum.
Ọ bụ ezie na BTC bụ mgbe niile ọnụ ọgụgụ nke cryptocurrency site na isi ahịa, njikwa ahịa ya adaala nke ukwuu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. A na-ahụ ọdịda ahụ nke ukwuu n'etiti 2017 na mmalite 2018. N'oge ndị ahụ, ọtụtụ ndị na-akwado Ethereum nwere olile anya na Flippening ga-ewere ọnọdụ.
Ndị nyocha kwuru na mmụbawanyewanye na ikike ịmepụta na ịbanye na Smart Smart ga-eme ka Ethereum karịa Bitcoin na ọkwa ndị ahụ, mana Flippening emeghị n'ezie.
Ebe nrụọrụ weebụ Flippening Watch (www.udubaba.edu.nkp) enwere ike iji ya mee ihe iji chọpụta ọganihu Ethereum megide Bitcoin.
Isiokwu bu nke aKwadoro: Otu esi achọta tokens ndị ahụ na-eme X100 tupu oge agafeela?
Isiokwu ọzọGịnị bụ Volatility?
Gịnị bụ netwọkụ enweghị ntụkwasị obi, na-enweghị mkpa ntụkwasị obi
Kedu ihe ọ pụtara m na cryptocurrencies na otu esi arụ ọrụ Ngwuputa
Kedu ihe bụ Black Swan? Anyị na-akọwa ihe omume Black Swan.